Indlela yokukhetha umnyango wangaphakathi - amathiphu
Ukuze ukhethe umnyango ofanele, okokuqala udinga ukwazi ama-nuances amaningi nezici ezingathinta izinga nokubukeka. Kuze kube yimanje, iminyango yenziwe ngezinto ezihlukahlukene, zinezinkampani eziningi, zihlanganisa futhi zihlanganisa zonke izixazululo zokwakha.
Ungakhetha kanjani iminyango yangaphakathi ephezulu?
Ukuze uzwisise lo mbuzo, kubalulekile ukuqonda imingcele lapho umkhiqizo ophezulu ongaba khona. Kubuye kubalulekile ukucabangela izici ezihlelekile nezisebenzayo zeminyango. Ukuze uqonde ukuthi ungakhetha kanjani umnyango ofanele, udinga ukucubungula okukhethwa kukho imikhiqizo enjalo. Ngokuvamile, izivalo zangaphakathi zizinhlobo ezimbili. Uhlobo lokuqala aluyizithulu (ngokusetshenziswa kwezinkuni, i-laminated noma i-cloth veneered), okwesibili - nge-glazing. Namuhla, uhlobo lwesithathu luthola ukuthandwa - ingilazi. Iminyango yezizithulu zenziwe ngendwangu ebushelelezi futhi ibe nephaneli langaphandle. Ukuqedela kungase kuhlanganiswe ngamapaneli wezinkuni noma ukufakwa kwesibuko. Enhliziyweni yezicabha ezinamaqabunga nakho kuyinqwaba. Ziyaziwa ngokuba khona kwe-slot yeglasi, elungiswe ngefreyimu.
Ungakhetha kanjani umnyango ofanele wezinto zokwakha?
Ukuze kwenziwe imikhiqizo efanayo, izinto ezihlukahlukene zisetshenziswa. Iminyango yezinkuni ingenziwa yilezi: i-walnut, i-oki, ama-mahogany, i-pin, umlotha. Kusukela ekusetshenzisweni okusetshenziselwa ukuthi intengo kanye nekhwalithi yeminyango ixhomeke. Okuthandwa kakhulu yimikhiqizo yephayinsi (etholakalayo ngentengo), izinguqulo ezikhethekile zingenziwa ezikhuni ze- mahogany ezingavamile. Uma sikhuluma ngezici ezinhle zezingcango zamapulangwe, kubalulekile ukuphawula: ukukhethwa okukhulu, izakhiwo zokuphilisa, ukukhetha okubanzi kokuklama, amandla okwandisa, ukulondolozwa kokushisa.
Iminyango ye-paneled yathandwa kakhulu ngenxa yesimiso sabo sefreyimu, esibahlinzeka ngokulula, ukuphila komsebenzi omude, ukumelana nezinguquko zokushisa kumswakama ophezulu, kanye nezakhiwo zokungabonakali. Iminyango ye-Mazonite iyinhlobo enomnotho kakhulu. Alula, kulula ukuhlangana futhi azohlala iminyaka eyishumi. Ukungalungi ukugxilwa kwezwi eliphansi. Iminyango esetshenzisiwe kakhulu evela ezintweni ezihlanganisiwe nezokufakelwa ngokusetshenziswa kwe-laminate, i-melamine, i-chipboard, i-MDF, i-fiberboard. Zinezinto ezinhle: ukumelana nomswakama nezinguquko zokushisa, zindleko eziphansi kanye nokukhetha okuhle. Okuncane okuthandwayo, kodwa okukhethwa kukho kungenziwa iminyango eyenziwe nge-plastic, metal noma ingilazi .
Ukuze uqonde ukuthi ungakhetha kanjani umnyango ofanele, kufanele ucabangele izeluleko zongcweti futhi unake uhlobo lokuvulwa, ngoba kuthinta kakhulu izici nokusebenza komkhiqizo jikelele. Umklamo ovame kakhulu umnyango wokuguqula, okubhekwa njengento ewusizo kakhulu, unomqondo omuhle kakhulu wokumisa umsindo. Iminyango ye-sliding - olunye uhlobo oluthandwayo, olufakwe ezinhlobonhlobo zokwakha nezango. Uma sicabangela inkinga yokwakhiwa kwegumbi, ke ukuhlunga iminyango kuhambisana kahle, ngenxa yokuthi ungagcina kanjani isikhala esiningi. Lolu hlobo lwenza indima yokuhlobisa. Ungakwazi futhi ukufaka iminyango yama radial nge-convex, concave noma ijamo elihlangene. Zingenye yezinhlobo ezibiza kakhulu, kodwa zangempela zeminyango.
Ukuze uphendule umbuzo wokuthi iyiphi imbala yokukhetha iminyango yangaphakathi, kuyadingeka ukuba ucabangele ama-nuances alandelayo: ingaphakathi, ifenisha, umhlobiso odongeni, umklamo wesakhiwo. Ungakhohlwa ukuthi umnyango wekhwalithi uyenziwe ngezinto zokwakheka kwemvelo futhi unomsebenzi omuhle.
Ukuhlelwa kwekamelo labantwana
Amaphephadonga wesitayela saseJapan
Iphephadonga elimnyama nelomhlophe lezindonga
Ukufelwa okuhle kusuka ku-plasterboard
I-Parquet noma i-laminate?
Cingo kusuka amabhodlela epulasitiki ngezandla zakho
Ibhokisi le-plasterboard endlini yangasese
Izitsha zokuhlobisa ngaphakathi kwekhishi
Indlela yokunciphisa umnyango womnyango wangaphambili?
UMadonna nendodana yakhe banikezwa ikhonsathi ye-impromptu epaki eliphakathi kweNew York
Isobho lesiGreki "Avgolemono"
Durian - izakhiwo eziwusizo
UKate Beckinsale noMat Rife abazifihli imizwa yethando
Ukubhema ngesikhathi sokukhulelwa - izinganekwane kanye neqiniso
Ukuqedela ibhaluni nge-plaster yokuhlobisa
I-Candice Swainpole noHerman Nicoli babelane ngesithombe sabo sokuqala
Indlela yokubeka amathayili phansi?
Uphawu lowesifazane nendoda
Izikhumba ze-Ankle - Fall 2015
Izimpawu zesifo sikashukela kubesifazane
Bougainvillea - ukunakekela ekhaya